Nguva yemberi mumabitcoins: imwe nzira yekudyara | Ehupfumi Zvemari
Nguva yemberi mumabitcoins: imwe nzira yekudyara
Un ramangwana Chibvumirano chemberi chinotaurirana mumusika wakarongeka unozvipira mapato maviri mukutenga nekutengesa chimwe chinhu (chinonzi midziyo yepasi) mune ramangwana zuva (zuva rekugadzirisa) uyezve izvo nemutengo wakatarwa, inova iyo huwandu hunofungidzirwa hweramangwana. Kusvika parizvino iri kirasi rakajairika pakati pechakanaka chikamu chevashoma nepakati varimi. Ivo vanogona kutora zvinzvimbo mune chero hupfumi hwemari. Kubva pakutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya kuenda kumarudzi ese emisika yemari. Kubva pamari kusvika pazvinhu zvakagadzirwa kana simbi yakakosha, seimwe yeakanyanya kukosha.
Asi iko zvino kupisa kwekutenga kwemabitcoins kwakatungamira kuchinhu chekuti kubva ikozvino zvichiita zvakare kuita rudzi urwu rwekuvhiya nemari ino chaiyo. Izvo hazvigone kukanganikwa kuti ndeimwe yemidziyo yanga yave iri yakadzoserwa mumwedzi ichangopfuura. Pamusoro pekudyara kwaifungidzirwa kuve kunobatsira uye kusimba kusvika parizvino. Asi munyika yemari chitarisiko chemhando nyowani dzekudyara chinowanzoitika. Uye iyi ndiyo nzira yakanakisa yekujekesa kune vanoita mari.Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve iyi yakakosha mari?
Nguva yemberi parizvino ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekuwana mari. Kusvikira pakuti iwe unogona kufarira kuita mari nekukurumidza sezvazvinogona, asi pamusoro pezvose nemutengo wakaderera kwazvo wezvemari uye nezvigadzirwa zvinogona kuve nekwaniso yekuwongorora izvo zvimiro zvetsika mumisika yemari zvinoshaya. Chaizvoizvo ramangwana mu BitCoins ndechimwe chezvigadzirwa izvi. Izvo zvinozivikanwa pamusoro pezvose nekuve wekupedzisira kusvika kumisika yemari. Uye zvinoita sekunge auya nechido chekugara uye kukwezva nhamba yakanaka yevatengesi iri kuda kuwana mibairo yakasimba yemari yekuwedzera chirevo chayo chemari gore rega.
1 Nguva mune bitcoins: yakawanda purofiti
2 Mechanics yechigadzirwa ichi
3 Inoshandiswa kubva kumakambani anotarisirwa
4 Ndeapi maitiro ayo?
5 Kupera nguva muzvibvumirano
6 Parizvino zvinongokanganisa bitcoins
Nguva mune bitcoins: yakawanda purofiti
Kana ichi chigadzirwa chitsva chemari chakasiyana nechimwe chinhu, imhaka yekuti chinokutendera kuti uwane purofiti inozivikanwa nemabasa ayo. Ehezve, akawanda kupfuura mune mamwe marudzi ekushanda. Asi chero zvakadaro, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kupfuura zvakajairwa nekuti unoratidzwa kune dzimwe njodzi. Iko kwaunogona kurasikirwa nechakanaka chikamu chemari yakachengetwa. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikonzero nei usingafanire kuisa mari zhinji mumhando iyi yemabasa akakosha. Kana zvisiri, pane kudaro, zano rako rinofanirwa kuve rekukwiridzira yako huru yekudyara. Iyo nzira yekudzivirira nzvimbo dzako kubva zvino zvichienda mberi.
Kune rimwe divi, bitcoin ramangwana iri imwe nzira inogona kuve inonakidza kudzivirira zvido zvako semudyari mudiki nepakati. Asi chero bedzi iwe uchipa yakakura tsika yemari sezvo mashandiro ari zvakanyanya kuoma. Uye kutanga zviri nani kuti iwe watove wakashanda pamwe neiyi chaiyo mari. Hazvishamisi kuti, chikamu chepamusoro chekudzidza chichagara chichiuya kuitira kuti iwe ugone kuzadzisa zvinangwa zvako nemari yemari iyi.
Mechanics yechigadzirwa ichi
Kuisa mari mune ramangwana hauzove nesarudzo kunze kwekuzvipira ku tenga kana kutengesa chinhu (iyo yepazasi) mune ramangwana kumisikidza izvozvi mamiriro ekutenga kana kutengesa. Mune ino kesi yakatorwa mukushanda neiyi cryptocurrency. Mhedzisiro yacho ichave inoshamisa kwazvo, neimwe nzira kana imwe. Asi nekungwarira kukuru kana uchitanga kufamba mumisika yemari. Nekuti chero kukanganisa mukuverenga kunogona kukutungamira kuti usiye maeuro mazhinji munzira.
Kune rimwe divi, ramangwana re bitcoin iri zano rakakodzera kwazvo kufungidzira. Mukuita izvi, izvi zvibvumirano zviri nyore pakati pevatengesi nevatengi iwe vaunogona kuve chikamu chavo kana ichi chiri chishuwo chako. Kana uchitengesa mukati misika yakavhurika ivo vanogamuchira kune chero emabasa. Ndokunge, unogona kutenga nekuvatengesa, zvinoenderana nemamiriro chaiwo ezvinhu zvemari izvi. Asi zvinodikanwa kuti fungidziro ndidzo dzinonyatsokurudzirwa pane ese mashandiro.
Inoshandiswa kubva kumakambani anotarisirwa
Dambudziko guru mukusarudzira remangwana remari iyi ndeyekuti vanofanirwa kuitwa kuburikidza nemusika unodzorwa. Uye mune ino pfungwa, bitcoin inongorongedzwa chete pamusika wakakosha wezvemari we Chicago, muUnited States. Iyo inodzorwa zvizere uye inokutendera iwe kuti utenge ramangwana seimwewo nzira yekuita kuti kuchengetedza kwako kubatsire. Iwe unofanirwa kuziva kuti kutengesa icho chiri pasi chiri chokwadi chakaomarara. Uye saka zvinonyanya kubatsira nezvakanzi zvigadzirwa zvinogadzirwa, uye imwe yeakanyanya kunaka nderemberi. Uye apa ndipo paunogona kusarudza iyi yemari nhumbi semafashoni semabitcoins.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti mari iyi inogona kutobvumidzwa kuburikidza neChicago ramangwana nemusika unotora (CBOE). Asi nhau dzakanaka kuvashambadziri vane mari iyi yemari pa radar ndeyekuti kubva svondo rino vane mumwe musika wekushandira. Iyo CME, a zvigadzirwa zvinotengesa kambani. Nemaonero akakodzera maererano nemutengo wayo kubvira apo mune yekutanga mairi iyo bitcoin inobvumidzwa yeyuniti imwe, nepo mune yechipiri yezvisungo iri yechishanu bitcoin. Nemusiyano unokosheswa pakati pemisika yeramangwana.
Ndeapi maitiro ayo?
Imwe yemaitiro aunogona kuchengeta semusimari mudiki nepakati auri iwe inongedzo yemabatirwo anoitwa misika iyi parizvino. Zvakanaka, chimwe chezviratidzo zvacho ndechekuti ramangwana rinowanzo bvumidza kusabhadhara iyo yese mutengo wechibvumirano, asi zvinopesana chete chikamu. Kune rimwe divi, ramangwana zvibvumirano zvakajairika mashandiro mune mamwe mafaindi emari. Semuenzaniso, idzo dzakatorwa kubva kune zvakasvibirira kana simbi yakakosha, pakati pezvimwe zvakakosha. Nekugamuchirwa kwepakati nevadiki vepakati nepakati.
Asi kana paine chero mutsauko unoratidzira izvi zvigadzirwa zvemari, hazvisi izvo zvimwe kunze kwekusagadzikana kwavo kwakanyanya. Iyo irimo mune angangoita ese mashandiro ayo uye inoenderana nekufamba kweiyi chaiwo mari mumisika yemari kwavakanyorwa. Mupfungwa iyi, misiyano yakafara inogona kuwanikwa kuburikidza nekufamba kwavo mumisika iri nyore. Nemisiyano iri pamusoro pe5% kana kunyangwe emahombekombe ane chisimba anodiwa nevashambadzi vane hukasha. Ndiani anoda mabhenefiti akareba inguva refu kwazvo yenguva.
Kupera nguva muzvibvumirano
Ehezve, chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza mune ramangwana re bitcoin ndicho icho chinoreva kune izvo kukura kwavo kuri. Zvakanaka, hazvina yunifomu asi zvinopesana zvinoenderana nemisika iyo yakanyorwa izvi zvakasarudzika zvemari midziyo. Kubva pane iyi nzira yakajairika, uye kuitira kuti uve neruzivo rwekushanda kwayo, une ramangwana reCBOE rine mwedzi mitatu. Nemakontrakiti mwedzi wega wega kuitira kuti chako chikwanise kugutsikana. Nepo pane izvo zvinopesana, mune rimwe ramangwana musika, iyo CME inongova ina chete pagore, iine kukura munaKurume, Chikumi, Gunyana naDecember.
Sezvauri kuona, kuomesa mashandiro mu bitcoin remangwana rakanyanya kuomarara kupfuura mune mamwe marudzi ekushanda. Nekudaro, iri musika unopinda izvo zvangotanga uye zvinotarisirwa kuti mumakore anotevera nguva dzekukura kwayo dzichawedzera. Saka kuti iwe uwane dzimwe nzira dzekuita kuti mari yako ichengetwe kubva kune chero nzira yekutaura. Nekuti panguva ino unenge uine mukana wakanyanya kuwana kumisika yemari iyi. Uye mune chero zvazvingaitika, kunze kwemiganhu yedu, sezvazvinonzwisisika, kune rimwe divi, kana uchitaura nezve ramangwana chikamu.
Parizvino zvinongokanganisa bitcoins
Kana iwe uchida kuita urwu rudzi rwekuvhiya iwe unofanirwa kuziva kuti ivo vanogoneswa chete kune ino cryptocurrency. Vamwe vese vari kure nedunhu iri mukudyara. Pakati pezvimwe zvikonzero, zviri pachena kuti vashoma maererano nezvinodiwa kubva kune vashoma nevapakati varimari. Naizvozvo, iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekutora chinzvimbo chavo zvakananga. Pasina chero mhando yekupindirana uye pasina kukura kweiyo ramangwana. Kunyangwe ichiri isingakwanise kutongwa kunze kuti achajoinha iri boka rakasarudzwa mumakore anotevera. Ehezve, nenzira dzekudyara dzinozove dzakasiyana zvachose neiyo yemari chaiyo.
Izvi zvigadzirwa zvemari uko iwe kwaunogona kuwana mari yakawanda, zvakanyanya kupfuura kuburikidza nedzimwe sarudzo mumaquity, asi zvakare nenjodzi zhinji. Iwe unofanirwa kuve wakajeka kwazvo nezve zvinangwa zvaunoda kuzadzikisa neako mashandiro. Kuti urege kutsauka kubva pamisimboti maitirwo emabasa aya kubva zvino zvichienda mberi. Chero nzira, iwe unotova neimwe nzira kuitira kuti iwe ugone kuita kuti capital yakadyarwa ibatsire. Iwe unogona pane imwe nguva unoda izvi zviwanikwa zvemari kuti uwane mari mumisika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Nguva yemberi mumabitcoins: imwe nzira yekudyara
Nerusi Mbudzi kumusika weSpanish wemusika?